Dowladda Itoobiyo oo ku wargelisay in madaxweynaha iyo ra'isul wasaaraha oo reebo min ah baarbuur ayna ciidamada Itoobiya iyo kuwa Yuganda la wareegaan ammaankooda iyo khilaafaka u dhexeeya labadaasi mas'uul loo la go'aamiyay in ay soo afjaraan golaha baarlamaanka. Ruunkinet 28/09/07
Warar lagu kalsoon yahay oo aan ka helnay magaalada Muqdisho ayaa ku waramaya in taliyaha ciidamada Itoobiya ee magaalada Muqdisho oo ku wargeliyay Col. Cabdullahi Yuusuf iyo Prof. Cali Geeddi in dhawaan la dhimi doono ciidamada ilaaliya oo u badan qaraabadooda.
Warka ayaa intaasi ku daraya in talihaasi uu u sheegay mas'uuliyiintan in loo reebi doono min hal gaari oo ay ku socdaan ayadoo amaankoodu ay ilaalin doonaan ciidamada Itoobiya iyo kuwa Yuganda.
Arrintan ayaa la sheegay in ay ka dhigi doonto labadan mas'uul magac u yaal dhex jooga magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo.
Sidoo kale, waxaa la dhimayaa sida la sheegay ciidamada Ilaaliya guddoomiya gobolka Banaadir iyo taliyaha ciidamada booliiska oo u badan jufooyinkooda.
Dhanka kale, khilaafka u dhexeeya madaweynaha iyo ra'isul wasaaraha ayaa la sheegay in uu markale ka sii daray in kastoo dhawaan ay waxgarad ka tirsan beesha muddullood ay sheegeen in ay dhex galaan labadan mas'uul ayna soo afjareen khilaafkooda.
Khilaafka labadan mas'uul ayaa filayaa in looga hadlo kulan ay golaha baarlamaanka dhawaan ku yeeelan doonaan magaalada Baydhabo ayadoo la eegaya xeerarka ay ku kala baxaan labada mas'uul ee ku qoran axdiga qaranka oo sida la sheega aan la tixgelin.
Golaha baarlamaanka ayaa durbada u kala qeybsamay uka hiilinta labada mas'uul in kastoo haatan awoodda ugu weyn ee dalka xukunta ay tahay dowladda Itoobiya.
Cabullahi Xuseen, Ruunkinet, London